1.2.1. स्रोतको सञ्जाल तयार गर्ने - Investigative Journalism Manual | Investigative Journalism Manual
> खण्ड > खण्ड तीन > 1.	खोज गर्न योजना कसरी बनाउने ? > 1.2.1. स्रोतको सञ्जाल तयार गर्ने
तपाईंले गरिरहेको अनुसन्धानले स्टोरीका लागि सबैभन्दा राम्रो स्रोत को हो भन्ने बारेमा जटिल र परस्पर विरोधी कुरा बताउन सक्छ । आफूलाई चाहिएका मानिस पत्ता नलागेसम्म ती मानिस को को होलान् भनेर सोचिरहनुहोस् । योजना बनाउँदा आफूलाई पृष्ठभूमि जानकारी र प्रमाण दिने दुवै थरीका मानिसको सूची बनाउनुपर्छ ।
कुन स्रोतले आफूले खोजेको कुन जानकारी दिन्छ भनी विचार गर्नुहोस् । परस्पर विरोधी जानकारी अथवा रहस्यमयी लाग्ने कुरा के के हुन् ती उल्लेख गर्नुहोस् । परस्पर विरोधी कुरा आउनु राम्रो हो किनभने यीमध्ये कुन सही हो भन्ने थाहा पाउँदा स्टोरी राम्रो हुन्छ । ‘यस्तो किन ?’ भनेर निरन्तर प्रश्न गर्नुहोस् । यसो गरेको खण्डमा स्टोरी एकदमै राम्रो हुनजान्छ । खोजमूलक स्टोरीका लागि जानकारी खोज्न समय र असाध्यै धेरै धैर्य चाहिन्छ । काम गर्दै जाँदा निराश हुन सकिन्छ । त्यसैले, आफूले गरिराखेका विषयमा एक टकसँग ध्यान दिनुपर्छ र पत्रकारिताको मूल मन्त्रबाट निर्देशित हुनुपर्छ । यो मूल मन्त्र होः पहरेदार भई समाजको सेवा गर्नु र आवाजविहीनहरूको आवाज बन्नु ।
> आफ्ना परियोजनाका बारेमा थाहा पाउन सक्ने मानिस र आफूले सम्पर्क गर्न बाँकी मानिसको विवरण तयार गर्नुहोस्, उनीहरूको सम्पर्क सूत्र लेख्नुहोस् ।